मूल्यांकनको कसीमा खतिवडाः चुके, चिप्लिए, मार्क्सवादी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहेनन् ! | Ratopati
‘प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएपछि सबै हुन्छ भन्ने सोचले चिप्लिए अर्थमन्त्री खतिवडा’
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २२, २०७७ chat_bubble_outline0
अर्थमन्त्रीको पदबाट डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजिनामासँगै उनी कति सफल कति असफल भन्दै विभिन्न तहबाट विश्लेषण तथा बहस शुरु भएको छ । खतिवडा प्रधानमन्त्रीको इच्छा र चाहनाप्रति बढी नै आश्रित हुँदा अर्थतन्त्र दिगो बनाउने गरी काम गर्न नसकेको आरोप उनी माथि लाग्न थालेको छ । सरकारका पूर्व मूख्य सचिव (अर्थविद्) डा. बिमल कोइराला ‘खतिवडा प्रधानमन्त्रीलाई ज्यादा रिझाउँन खोज्दा चिप्लिएको’ बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रिझाउँने हुँदा प्रधानमन्त्रीले अह्राएको मात्र काम गर्ने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । प्रधानमन्त्रीप्रतिको उनको बफादारीमा शंका छ्रैन । तर उनमा भएको प्रतिभा भने देखाउन सकेनन । अर्थतन्त्रलाई बेजोड रुपले पछिसम्म दिगो बनाउने काम केही पनि भएन ।’
अर्का अर्थविद्को पनि खतिवडाप्रतिको धारणा मिल्दोजुल्दो छ । प्रा.डा.डिल्लीराज खनाल दुईतिहायको सरकारसँग गर्न सक्ने धेरै अवसर भएपनि यसमा ब्यापक चुकेको बताउँछन् । आमुल परिवर्तनको आश देखाएको बामपन्थी घोषणापत्रलाई सरकारले पछ्याउन नसकेको उनले आरोप लगाए । अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचनामा सरकार चुकको उनको धारणा छ ।
अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको खतिवडाप्रतिको मूल्यांकन पनि खनालसँग मिल्दोजुल्दो छ । अर्थतन्त्रमा रातो सिंग्नल देखाएका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई हरियाली बनाउँन नसकेर रातै छोडेर गएको क्षेत्री बताउँछन् । तर खतिवडाको काम गराइको असल पक्षको उल्लेख गर्दै ‘अर्थमन्त्रकिो रुपमा खतिवडाले केही विषयमा भने सिस्टम बसालेको’ क्षेत्री बताउँछन् ।
नेकपाका नेता राम कार्की खतिवडाका काम, कारवाही र व्यवहारमा मार्क्सवादी बाटो र सिद्धान्तमाथि कहीँ पनि प्रतिवद्धता तथा विश्वास नदेखिएको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले गरेका वा गर्न खोजेका कामकारवाहीहरुलाई हामीले कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्नेबारे हामीले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग मत मागेका थियौं । प्रस्तुत छः उनीहरुको धारणा जस्ताको तस्तै उनीहरुकै शब्दमा
बेथिति अन्त्य गर्न व्यापक चुके
चुनावी घोषणापत्र अनुसार संविधानले निर्देश गरेका कुराहरु अघि बढाउने सन्दर्भमा समृद्धिको एजेण्डामा केही पहल शुरुको बजेटमा भए । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य, प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य, अर्थतन्त्रको संचना, चरित्र, रेमिट्यास आयात, उपभोगमा आधारित केही केही शहर केन्द्रित र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यसको फाइदा तलतल जानेछ भन्ने उदारवादी मान्यता हो र त्यसलाई हामी सच्याउँछौ र अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाउने, रोजगारी दिने, स्रोत र साधान प्रयोग गर्ने, नयाँ ढंगले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गरेर जाने जस्ता विषय राखिएका थिए । श्वेतपत्रमै टेकेर खर्च पुनरावलोकनमा राखिएका ‘टम्र्स अफ रिफरेन्स’, बजेटका कार्यक्रम, रकमान्तर, स्रोत सुनिश्चितता बजेटमा राखिएका थिए । जथाभावी आयोजना छान्ने, सञ्चालन गर्ने, रकमान्तर गर्ने, वर्षको अन्त्यमा सारा पैसा खर्च गर्ने जस्ता विषयमा सच्याउँनुपर्ने थियो तर यथास्थितिमा आन्तरिक र प्राविधिक पक्षबाट मात्र कुराहरुलाई जोड्ने र आधारभुत रुपमा संरचना, संस्थागत परिपाटी, खराब शासन र बेथितिलाई तोड्ने काम गर्न सकेको देखिएन । दुइ तिहाएको वामपन्थी सरकारले त्यो स्थितिलार्य अन्त्य गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा ब्यापक रुपमा सरकार चुकेको छ ।
परिपाटीसँगै जोडर डाइभर सिटमा बसेकोले त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने थियो तर जान सकेन । अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । पहलहरु भए, लगानी सम्मेलन भयो, कानुनमा परिवर्तन र सुधार भए । तर तआम जनताले यथास्थितिमा केही केही मात्र सुधार गरेर जाने परिकल्पनाको आधारमा यो सरकारलाई मत दिएका थिएनन् । अलि अलि सुधार गरेजस्तो गर्नलाई घोषणापत्र बनेको थिएन । अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तन र सुधार ल्याउने उदेश्यसहितको घोषणापत्र थियो । आमुल सुधार र परिवर्तन अर्थतन्त्र, जनता र सबैतिरले अनुभुति गर्न पाउने गरी कम्तीमा एउटा आधार खडा गर्नुपथ्र्यो । यसमा केही केही पहल भए तर त्यो दीगो र सफल हुने खालका भएनन् ।
उनको काम राजनीति जोगाउनका लागि मात्र भयो
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री (अर्थविद्)
मूलतः उहाँले राजनीति जोगाउनका लागि कुनै पनि कुरा गर्न छोड्नु भएन । त्यो खतिवडाको एउटा कमजोर पक्ष हो ।
सकारात्मक कोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा एउटा पद्दति बसाल्ने ल्याउने कामको थालनी भएको थियो । जस्तै, बैंकबाट ऋण लिन बढी नाफा देखाउने र कर बुझाउनु पर्दा घाटा देखाउने दुई खालको ब्यालेन्ससिट राख्ने प्रचलन थियो । उनले त्यसलाई अन्त्य गर्दै अर्थात् एकल व्यालेन्ससिटको अवधारणा ल्याए ।
निर्णय प्रक्रियामा पनि हतारोपन देखियो । उदाहरणको लागि, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि दिने भत्ता काटियो तर ठुलो हल्ला खल्ला गरेपछि मात्र पुर्नस्थापित भयो । संवेदनशील किसिमका कुरामा पनि राजनीति हावी भउको देखियो । यस्तै रेलवेको लागि ३५ अर्ब छुट्याइयो तर जग्गा अधिग्रहण गरेको छैन । ठेक्कापट्टा काम अर्थले गर्ने होइन भनी भनिएला । उनले अर्थमन्त्री भएलगत्तै श्वेतपत्र निकाले तर त्यसमा उल्लेख गरिउका सबै कुराहरु साँचो कुरा थिएनन् । त्यसमा अर्थतनत्रमा खडेरी परेको छ भनिएको थियो । उनले आफ्नो कामलाई सही देखाउँन कतिपय तथ्यमा तोडमोड गरेको पनि देखियो ।
समग्रमा खतिवडाका काम कारवाही परिणाममुखी रहेन । तर अहिले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर बहिर्गमन भए पनि उहाँ फेर अर्थमा कुनै न कुनै रुपमा फर्केर आउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आज्ञाकारी मात्र भए
डा. विमल कोइराला, पूर्व प्रशासक
अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाको राम्रा काम खासै देखिएन । उहाँ टेक्नोक्र्याट हुनुहुन्छ । उहाँबाट अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचनाको आश थियो । तर उहाँका कार्यकालमा ठोस रुपमा नयाँ कुरा केही आएन । अहिलेको चुनौती खर्च घटाउने र जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित हुने थियो । तर खर्च घटाउन प्रयास समेत गरेको देखिएन । संसद विकास कोष खारेजी, कतिपय विकास अयोजना तत्काल रोक्नुपर्ने र अनुकुल समयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसमा साहस प्रदर्शन भएन ।
तर पनि उहाँले बिगारेको पनि छैन अर्थतन्त्र । उहाँको कार्यकाल औसत छ । गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडाको कमजोरी नै प्रधानमन्त्री रिझाएपछि सबै हुन्छ भन्ने सोच्नु रह्यो । अर्थमन्त्रीका रुपमा उहाँबाट राजनीति रुपले व्यापक सहमति खोज्ने काम भएन । त्यसले गर्दा नयाँ काम हुन सकेन । रुटिन काममा अल्झिए गर्न खोजेको काम पनि पुरा भएन ।
खतिवडाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रिझाउनेतिर बढी केन्द्रति हँुदा प्रधानमन्त्रीले अह्राएको मात्र काम गर्ने र आफ्नो निर्णयलाई समेत वेवास्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा उहँँ पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीप्रतिको शंकारहित वफादारिता रहेको उहाँले प्रतिभा भने देखाउनु भएन । फलतः अर्थतन्त्रलाई बेजोड रुपले पछिसम्म दिगो बनाउने काम केही पनि भएन ।
राजनीतिक लगामबिनाको अर्थतन्त्र जहाँ पनि दुर्घटनाको सिकार हुन्छ​
राम कार्की, नेता, नेकपा
अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने कुरा गलत हो । हामी मार्क्सवादीहरु राजनीतिक अर्थशास्त्र भन्छौ । अर्थात् अर्थतन्त्रलाई पनि राजनीतिले डोर्‍याएको हुन्छ । राजनीतिक लगामबिनाको अर्थतन्त्र जहाँ पनि दुर्घटनाको सिकार हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा टीमको क्याप्टेनले चाहेको मानिसलाई मन्त्री बनाउँछन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा युवराज खतिवडाको छनौट हुँदाखेरि नै म जस्तो मानिसलाई ‘मुलुक समाजवादको दिशातिर जाँदैन, नवउदारवादी पुँजीवादलाई अझ बलियो बनाउने कोसि गरिन्छ’ भन्ने लागेको थियो ।
अहिले पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडापार्टीको केन्द्रिय सदस्य पनि बनाइनु भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा यसरी केन्द्रिय समिति बनाउँने चलन एकदमै नयाँ हो । रातारात केन्द्रिय समिति सदस्य बनाइयो उहाँलाई । पार्टी सदस्य बन्नका लागि त माथिल्लो वर्गबाट आएको मानिसले लामो परिश्रम गर्नुपर्छ । म जमानामा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको व्यक्ति हुँ । त्यतिबेला म सँगै गएका, मेरा मातहत काम गर्नेले पहिले सदस्यता पाउनुभयो । मैले त्यसको झण्डै एक डेढ बर्षपछि मात्रै सदस्यता पाएको थिए । म अलि माथिल्लो हैसियतबाट आएको थिए । अहिले गभर्नर भइसकेका, ठुलो ठुलो पद बहाल गरिसकेका मान्छेलाई रातारात केन्द्रिय समितिमा ल्याइयो । यसमा उनको दोष वा गुण भन्दा पनि हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णयमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सन्दर्भमा धेरै पटक अर्थमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ– अब असार साउनमा पिचरोड बनाउने, हताहतार पुल बनाउने काम रोकिन्छ ? उहाँको जवाफ ‘यो कल्पनै नगर्नुस्’ भन्ने थियो । मेरो भनाइ के हो भने, जबसम्म असारे विकास देखिन्छ वा साउनको भेलमा पिचरोड बनाउँदै गरेको देखिन्छ, तब त्यहाँ बुझ्नुपर्‍यो कि अर्थतन्त्रको परम्परागत परिपाटीमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । रामशरण महतको पालामा पनि त्यही थियो, प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा पनि त्यही । अर्थतन्त्रमा ठोस र खास पविर्तन गराउँनेतिर कोही गएनन् ।
गलत वा विपरीत अवस्थाको व्यवस्थामा पनि राम्रो मानिसले अलि अलि परिवर्तन गरेर देखाउन सक्छ । तर त्यसको लागि विचार र सिद्धान्त मुख्य कुरा हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, उहाँका काम, कारवाही र व्यवहारमा मार्क्सवादी बाटो र सिद्धान्तमाथि कहीँ पनि प्रतिवद्धता देखिएन, त्यसमा उहाँको अलिकतिपनि विश्वास देखिएन ।